Heshiiska Kadib: Sida loola dhaqmo Macaamiisha Habka Guusha Macmiilka | Martech Zone
Waxaad tahay iibiye, waxaad samaysaa iib. Adiga waa iibinta.
Taasina waa kaliya, waxaad u maleyneysaa in shaqadaadii ay dhammaatay oo aad u gudubtay midda xigta. Dadka wax iibinaya qaarkood ma garanayaan goorta ay joojinayaan iibinta iyo goorta ay bilaabayaan maaraynta iibka ay hore u sameeyeen.
Xaqiiqdu waxay tahay, cilaaqaadka macaamiisha iibka ka dib ayaa muhiim u ah sida cilaaqaadka iibka hore. Waxaa jira dhowr hab-dhaqan oo uu ganacsigaagu ku hanan karo si uu u wanaajiyo xidhiidhkiisa macaamiisha iibka ka dib.
Si wada jir ah, dhaqamadan waxaa lagu magacaabaa Istaraatiijiyada Guusha Macaamiisha waxaana loo qorsheeyay inay ka caawiyaan ganacsigaaga dhinacyo kala duwan.
Ku soo noqoshada maalgashiga (ROI): Macmiil kasta oo la hayo waa hal macaamiil ka yar oo u baahan in la kasbado si loo gaaro yoolalka dakhliga.
Faallooyin ka wanaagsan: Calaamadda wacdinta iyo faallooyinka boggaga sida Kafeega iyo G2 hagaaji sawirka astaanta oo keen macaamiil badan.
Jawaab celin dheeri ah Yaan lagu khaldin dib u eegista, jawaab celinta waa macluumaadka gudaha ee loo isticmaali karo si loo horumariyo alaabtaada.
Way fiican tahay, laakiin sidee baan u samaynaa?
Haddii jawaabta gaaban ay tahay mid si wanaagsan loo fuliyay, oo dhan walba ka kooban istiraatijiyadda guusha macaamiisha, jawaabta dheer waxay ku jirtaa maqaalkan.
Waxa ay qeexaysaa afarta tiir ee Guusha Macaamiisha iyo sida loo dhigo hor-iyo-dhexda hababka ganacsigaaga.
Waa maxay Guusha Macaamiisha?
Istaraatiijiyadda Guusha Macmiilku waa hab firfircoon oo loo wajaho cilaaqaadka macaamiisha.
Maaraynta Xidhiidhka Macmiilku waxa ay ku lug leedahay odoroska dhibatoyinka uu macmiilku kala kulmi karo safarkooda iyaga oo garanaya oo fahmaya macmiilka, baahiyahooda, iyo warshadahooda. Waxay qaadataa waxbarashada wadajirka ah ee sifooyinka alaabta iyo isticmaalka, joogto ah, isgaarsiinta channel-ka badan, iyo toosinta kooxda gudaha si loo hirgeliyo Guusha Macaamilka.
Markaa, waxaa laga yaabaa inaad la yaabto halka ay taasi ku habboon tahay ganacsigaaga.
Iyada oo leh ilo ku filan, ganacsiyada waaweyni waxay awoodaan inay shaqaaleeyaan labada kooxood ee Taageerada Macmiilka iyo Guusha Macmiilka. Nasiib darro, qof kastaa iskuma yeeri karo ganacsi weyn… weli.
Ganacsiyada yaryar waxay isku dari karaan kooxaha Iibka iyo Taageerada sidii hal koox oo guulaysta macaamiisha. Waxay tan ku sameeyaan iyagoo yareynaya baahida loo qabo taageerada gacan-ku-haynta iyada oo loo marayo abuurista agab waxbarasho oo macaamiisha ah oo iskood u adeega: Saldhig aqooneed, maqaallada xarunta caawinta, casharrada fiidiyowga, webinars joogto ah, iyo wax kasta oo weydii-wax kasta.
Tani waxay xoraynaysaa wakhtiga wakiilka Guusha Macmiilka si ay diiradda u saarto dhisidda xidhiidhada macaamiisha wanaagsan, fahamka ganacsiyada macaamiisha si wanaagsan, iyo ka caawinta inay koraan.
Warshadaha B2B SaaS gaar ahaan, guusha ganacsigaaga waxay si buuxda ugu xidhan tahay guusha macaamiishaada. Macaamiisha waxay iibsadaan alaabtaada ama adeegaaga si ay u horumariyaan tooda. Haddii hirgelinta adeeggaagu uu iyaga ku guuleysto, maxay u sii wadi waayeen inay ku biiraan? Wadashaqeyn joogta ah ayaa kaa ilaalineysa inaad soo dhawaato korriinkana.
Guusha Macaamiisha waa guul ganacsi.
Tiirka Guusha Macmiilka 1: Hawlkarnimo
Hawlkarnimadu waa tiirka guusha macmiilka.
U firfircoonida macaamiisha jira waa fure. Ha sugin in macmiilku kula soo xidhiidho dhibaato. U deji wicitaanada qiimaynta joogtada ah si aad u hubiso, una maqasho khibradooda alaabtaada, oo aad u ogaato in ay la kulanto filashadooda hore.
Intaa waxa dheer, marka sifooyin ama alaabooyin cusub lagu soo kordhiyo tiradaada, u sheeg aduunka.
Si gaar ah, u sheeg macaamiisha ay tahay inay ka faa'iidaystaan ​​wax ku kordhinta cusub. Ku marti qaad wicitaanka muujinta gaarka ah ama marti geli kulan toos ah I-wax kasta oo tus agagaarka.
Dhab ahaantii, Guusha Macmiilku waa mid firfircoon oo waxay bilaabataa xitaa ka hor inta uusan macaamiishu noqon macmiil.
Hogaamiyaasha tayada iibka ee dusha sare leh
Hogaamiyayaasha u qalma iibka (SQL-yada) waa kuwa leh fursadaha ugu sarreeya ee beddelidda.
Waxaa laga yaabaa inay hore u muujiyeen xiisaha alaabtaada suuqgeynta, la xidhiidha kooxda iibka, ama si toos ah u saxiixday tijaabo bilaash ah. Kuwani waa hoggaan kulul, waxaana muhiim ah in si gacan ah loola shaqeeyo si ay u soo galaan inta ay weli khadka ku jiraan. Waxaa jira siyaabo aad ugu faa'iidaysan karto kulamadan.
Gaaryeeli wicitaanada demo Haddii hogaanka uu hore u saxeexay nidaamka oo uu bilaabay isticmaalkiisa, hubi sifooyinka ay tijaabiyeen oo ku dhis wicitaanka demo ee iyaga ku saleysan.
Baro hogaanka ka hor inta aanad wacin. Soo hel macluumaad badan oo ku saabsan shirkadda intii aad awooddo: Cabbirka, qaab-dhismeedka waaxda, warshadaha, guulahoodii dhawaa, iyo halganka hadda jira. Qorshee demo si aad ula jaanqaado xaaladdooda gaarka ah.
Weydii natiijooyinka ay uga baahan yihiin software-kaaga oo ku dhis xidhiidhkaaga agagaarka yoolalkaas. Ka dib, tus dariiqa ugu gaaban ee yoolalkaas.
Ha soo bandhigin dhammaan shaqeynta laga bilaabo helitaanka; waxay keeni kartaa in hogaanka uu niyad jabo. Ku bilow kaliya sifooyinka lagama maarmaanka u ah oo sharax wax badan marka ay ku koraan alaabta.
Wacitaanka qiimaynta macaamiisha joogtada ah
joogtada ah qiimayntu waxay ku baaqaysaa, marka macaamiisha do noqo macaamiil, sidoo kale waa inay qayb ka noqdaan istaraatiijiyada guusha macmiilka.
Maareeyayaasha Guusha Macaamiisha ha qabtaan shaqa-guriyeedka, dib u eegaan akoonnada macmiilka, oo ha habeeyaan la tashiyo joogto ah iyaga si ay u fahmaan horumarkooda fulinta iyo isticmaalka dheeraadka ah ee alaabta. Qaab dhismeedka guud ee wicitaanada qiimeynta joogtada ah ayaa u ekaan kara sidan…
Wacitaanka qiimaynta bilowga ah ee hogaaminta tayada iibka leh, sida kor lagu sharaxay.
Hubi hirgelinta hal bil, hubinta in si habsami leh loo hirgeliyo.
Cusbooneysii lix bilood oo hagitaan ah oo ku saabsan sifooyin horumarsan.
Dib u eegis hal sano ah si loo ogaado isbedel kasta oo loo baahan yahay ka hor dib-u-diiwaangelinta.
Waqtigu wuu kala duwanaan karaa iyadoo ku xiran nooca badeecada iyo qaabka ganacsi ee shirkaddaada. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in la hubiyo xiriirka joogtada ah ee macaamiisha.
Ka-hortagga Guusha Macmiilka waxay si laba-geesood ah uga soo horjeedaa qaabka Caawinta Macmiilka ee soo jireenka ah.
Marka la odoroso dhibaatooyinka, su'aalaha, iyo codsiyada, waxaan hubin karnaa inaysan waligood sabab u noqon macmiilka inuu baxo.
Tiirka Guusha Macmiilka 2: Waxbarashada
Haddii u ololayntu ay tahay tiirka guusha macmiilka, waxbarashadu waa afarta darbi ee ilaalinaysa wax kasta oo gudaha ah.
Hawlkarnimadu waa waxbarashada shaqaalahaaga ee ku saabsan warshadaha macaamiisha iyo isticmaalka alaabta.
Waxbarashada waxaa loola jeedaa siinta macaamiisha faham adag oo ku saabsan sida ugu wanaagsan ee loo isticmaalo badeecada iyadoo ku saleysan baahidooda. Macaamiishu waxay u baahan yihiin xog cusub, wakhtiga dhabta ah ee ku saabsan alaabta si ay u horumariyaan xeeladahooda mustaqbalka fog oo ay u cabbiraan kobaca ganacsigooda iyada oo alaabtaadu tahay udub dhexaadka. Si taas loo gaaro, nuxurku waa boqor.
Nuxurku waa boqor
Suuqgeyntu waa mishiin, soo saara nuxurka muhiimka ah ee macaamiisha jira iyo sidoo kale kuwa mustaqbalka leh.
Marka laga reebo wargeysyada iyo ogeysiisyada soo-saarka ee ku saabsan cusboonaysiinta iyo sii daynta muhiimka ah, socodsii webinarada tooska ah iyo sifada socodka ee lagu daray ama la hagaajiyay. Ku ilaali socodka joogtada ah ee waxbarashada iyo ka hor-siixitaanka waxyaabaha ku jira mareegahaaga, sida hagayaasha, buugaagta elektaroonigga ah, xaashida qishka, iyo liisaska hubinta. Sii wad xitaa sii…
Bogga FAQ wuxuu u kala qaybsan yahay qaybo ku salaysan sifooyin kala duwan oo alaabta.
Waxyaabaha maqalka ah sida podcast-yada ayaa bixiya kanaal kale oo ka kooban hawlgelinta macaamiisha.
Shirarka iyo aqoon-is-weydaarsiyada alaabta.
Nidaamka maamulka waxbarashada (Lms) oo wata muuqaalo waxbarasho iyo casharro.
Akadeemiyada iyo shahaadooyinka kuwa raba inay noqdaan shuraako ama iibiyeyaasha.
Aqoon la'aanta sida loo isticmaalo badeecada waa mid ka mid ah sababaha ugu baahsan ee macmiilka Qalabka saxda ah ee lagu baro macaamiisha si loo baabi'iyo sababtan.
Tiirka Guusha Macmiilka 3: Isgaadhsiinta
Guusha macmiilka iyo haddii kale, ganacsigaagu waa inuu ka dhigaa isgaarsiin wax ku ool ah mudnaan maadaama ay ku dadaaleyso sameynta iyo kobaca.
Waayo-aragnimada macmiilka ee wada sheekaysigaCCA) macneheedu waa siinta taageero joogto ah iyo hagitaan macaamiisha si gaar ah. Hadafka CCE waa in la furo wada-xiriir laba-geesood ah oo u dhexeeya macmiilka iyo astaanta, heer ay macaamiishu ku kalsoon yihiin inay u yimaadaan ku celcelinta guusha oo leh talooyinka hagaajinta iyo jawaab celinta daacadda ah.
La saaxiib macaamiisha adiga oo ogaanaya wax badan oo iyaga ku saabsan marka loo eego shaqada, haddii ay rabaan inay wadaagaan.
U fududee ereyada farsamada, ku hadal luqad ay macaamiishu fahmaan.
Ha ka xishoon inaad waydiiso su'aalo badan. Naftaada wax ka baro ganacsigooda.
Ka fogow qoraalada; wada hadal dhab ah oo uu hagayo khibrad. Khabiir dhanka warshadaha ah, uma baahnid qoraal.
La kulan macaamiisha halka ay joogaan. Isticmaal xarun dhexe tignoolajiyada sida madal maamulka xidhiidhka macaamiisha (CRM) in la ilaaliyo dhammaan macnaha macmiisha hal meel, iyada oo aan loo eegin kanaalka uu ka yimid.
Intaa waxaa dheer, isgaarsiin wax ku ool ah macnaheedu waa aasaasida bulsho agagaarka sumaddaada.
Bulsho ganacsi oo la taaban karo waa qalab wax ku ool ah oo la isugu keeno macaamiisha si ay u raacaan ujeedo la wadaago markaad isticmaalayso alaabtaada.
Koox bulsheed oo fudud - ha ahaato badeecada ama warbaahinta bulshada - waxay aad ugu dheeraan kartaa isku xidhka isticmaalayaasha su'aalaha, jawaabaha, iyo xitaa xalinta sifooyinka alaabta qaarkood. Waxay siisaa macaamiisha laba-qiimo - fursad ay kula xiriiraan oo ay kula kulmaan macaamiisha iman kara ama la-hawlgalayaasha.
Marka laga soo tago bulsho ganacsi oo la taaban karo, waxaa jira habab kale oo lagu dhiso hab-dhaqan bulsho oo ku xeeran astaantaada…
U dhig macaamiishaada sidii hoggaamiyeyaal fikir oo leh nuxur isticmaaluhu soo saaray.
Samee danjiraha astaanta ama barnaamijka lammaanaha si aad u dhiirigeliso wacdinta sumadda.
Dhacdooyinka khadka tooska ah iyo kuwa khadka tooska ahba waxay caawiyaan macaamiisha xitaa in ka badan.
Isgaarsiinta wanaagsan waa ganacsi aasaasi ah. Dhanka kale, bulshada ganacsigu waxay ku siinaysaa faa'iidooyin laba-labo ah oo macmiilku iska diiwaan gelinayo alaabtaada. Waa sabab kale oo aad u jeceshahay ganacsigaaga iyo badeecadaada.
Tiirka Guusha Macmiilka 4: Is-habaynta
Xidhiidhka u dhexeeya kooxaha ganacsigaaga waa tiirka ugu dambeeya ee Guusha Macaamilka pantheon. Gaar ahaan, Guusha Macmiilku waxay u baahan tahay in la isku toosiyo Alaabta, Suuqgeynta, iyo kooxaha Iibka.
In kasta oo ay muhiim u tahay waax kasta in ay yeelato yoolal gaar ah oo ay ku gaadho, dhammaan hadafyadaas waa in ay ku biiraan hadaf ganacsi oo la wadaago. Toosintu waa habka samaynta isfaham guud si loo caawiyo wada shaqayn wanaagsan oo ku wajahan yoolalka la wadaago.
Haddii ay wadaagaan yoolalka, wadaagaan natiijooyinka, oo ay wadaagaan masuuliyadaha, ugu dambeyntii waxay wadaagi doonaan guusha.
Tignoolajiyada la wadaago ayaa ah laf-dhabarta toosinta kooxda wax ku oolka ah
Waxaas oo dhan ka sii sarreeya, toosintu waxay u baahan tahay qalabka meesha yaalla ee ay shaqaaluhu wadaagi karaan oo ay la xidhiidhi karaan ilaa xad kala duwan.
Sida aan sheego, suuqa SaaS ayaa sii kordhaya. Tan iyo markii dunidu ay fogaatay 2020, qalabkani wuxuu noqday mid si ballaaran loo heli karo, oo ballaaran waxa ay qaban karaan.
Tiknoolajiyada CRM waxay aad ugu fogtahay dhanka isku toosinta kooxaha. Marka la keeno dhammaan xogta ganacsiga ee dallada CRM isku mid ah, ganacsiyadu waxay u isticmaali karaan inay isku toosiyaan iyo hab-socodka otomaatig ah, la xidhiidho midba midka kale ee la xidhiidha dhibco xogeed gaar ah, deji hawlo la xidhiidha diiwaanada shakhsiga ah, oo ka warbixi, khamify, oo sawir qiyaasaha iyo yoolalka isla dashboard-ka.
Caadiyan, xidhiidhka joogtada ah ee u dhexeeya kooxaha si loo xiro wareegyada jawaab celinta
In kooxaha wax iibinta iyo suuqgeyntu kulmaan todobaadkiiba hal mar si ay uga gudbaan guulahoodii usbuucii la soo dhaafay. Sharax yoolalka la wadaago ee la gaaray iyo kuwa la doonayo in la gaaro kuwa xiga. La kaasho oo la wadaag khibradda xisaabaadka macmiilka ee gaarka ah si aad uga gudubto jid-gooyo kasta oo iman kara dib-u-diiwaangelinta.
Sidoo kale, kooxaha alaabadu waa inay qabtaan bandhig todobaadle ah si ay u cusboonaysiiyaan horumarkooda wakhtiga dhabta ah, iyagoo siinaya guusha macaamiisha fursad ay ku dhex galaan wicitaanada qiimaynta ee macaamiisha.
Samee jawaab celin gudaha ah qolalka lagu sheekeysto halkaas oo wakiilada Guushu ay ku dhejin karaan wixii kutaanno ah ama talooyinka macaamiisha badeecaduna waxay isla markaaba ugu qorshayn kartaa iyaga khariidadda badeecadooda. Wareegyada jawaab celinta ee xiran ayaa qiimo weyn u leh Guusha Macmiilka. Dabeecaddoodu waxay u baahan tahay gacmo koox kasta.
Iibka ama Guusha Macmiilku waxay si buuxda u fahmaan macaamiisha, oo waxay ka helaan waxay macaamiishu u baahan yihiin oo ay ka rabaan badeecad. Waxay la hadlaan macaamiisha bixiya jawaab celinta.
Suuqgeyntu waxay abuurtaa nuxurka si ay u soo bandhigto oo wax uga barato hirgelinta jawaab celinta. Haddii wax weyn isbedelaan, markaas waxay u baahan kartaa ololaheeda.
Kooxda wax soo saarku waxay hirgeliyaan isbeddelladaas, iyagoo jir ahaan xiraya wareegyada jawaab-celinta.
Isku toosinta kooxdu waxay caawisaa in si dhakhso ah loo xiro wareegyada jawaab celinta, taasoo la micno ah in macmiilku si sax ah u helayo waxa uu rabo oo uu uga baahan yahay badeecada.
Waxay yiraahdeen ma dhammaan ilaa gabadha buuran ay heesto.
Hagaag, arrintu waxay tahay, way lumisay codkeedii. Safarka macmiilku ma dhammaanayo ilaa aad guul darreysato.
(Customer) Guushu waa lidka guuldarrada.
Tags: CRMjawaab celinta macaamiishamaamulka xiriirka macaamiishaxiriirka macaamiishadib u eegista macaamiishaguul macaamilkaistaraatijiyad guusha macaamiishamaqaallada xarunta caawintasaldhiga cilmigadusha saaranadeegga macaamiisha firfircoonfadhiyada qnaku soo noqo maalgashigaKordhinta Iibkahogaanka iibka-qalmacasharrada fiidiyahaWebinars
Waa maxay Ujeeddada Bixinta? Sidee Loo Adeegsadaa Si Loo Wanaajiyo Heerarka Beddelka?
Waa maxay Backlinking? Sida loo soo saaro dib-u-xirayaasha tayada leh adiga oo aan khatar gelinin domainkaaga